Oniversiten'i Mahajanga: Nivoaka tamin'ny fahanginany ny mpitantana
vendredi, 12 janvier 2018 08:31
Nampiantso Mpanao gazety teny amin'ny Kakal ireo mpitantana ny oniversiten'i Mahajanga, omaly alakamisy hariva, nitondra fanazavana mahakasika ny resaka Codis na ny filankevitry ny fitsipi-pifehezana izay ezahin'ireo mpianatra vitsivitsy voakasika voizina hanakorontanana sy hanakanana ny fampianarana tsy hitohy.
Nohazavain'izy ireo ny fomba nandrindrana ny asa rehetra natao hatramin'ny namoahana ny valiny dia ny sazy azon'ireo mpianatra tsirairay. Natao nanoloana ny vadintany avokoa ny asa rehetra nanomboka tamin'ny fisafidianana ireo izay ho mpikambana handrafitra ny filankevitra hatrany amin'ny fandefasana taratasy fiantsoana sy ny namoahana ny vokatra.
Araka ny fehezan-dalana dia tsy maintsy ao anaty filankevitra ny lehiben'ny sampam-pampianarana nahitana mpianatra voakasiky ny Codis, miampy mpampianatra iray avy ao. Manampy azy ireo ny solontenan'ireo sampandraharaha toy ny mpiandraikitra ny trano ary mpianatra miisa valo izay natao antsapaka.
Nanazava ny mpitondratenin'ny filankevitra, ny Dr Robelson Jean Sterah, fa tsy marina ny tsaho miely fa misy mpianatra voaroaka. Tsy fandroahana no natao fa fampiatoana ireo mpianatra sasany mandritra ny fotoana voafetra, ary tsy noho ny fanaovana fitakiana no nanenjehana ireo mpianatra ireo, fa noho ny tsy fanarahana ny fitsipika pedagôjika sy ara-piarahamonin'ny oniversite, izay hifampifehezana.
Tafiditra anatin'izany ny fanimbana fananam-panjajana, fandrobana fananan'ny mpianatra namana na fifandratrana.
Araka ny tatitra ihany dia mpianatra miisa 65 no nahazo fiantsoana saingy ny 4 ihany no nanatrika izany. 62% amin'ireo, nahazo sazy mihantona, izany hoe, afaka manatrika fanadinana saingy mihatra avy hatrany ny sazy raha vao manao hadisoana. Ny 32%, sazy mihatra ary ny 6% afaka madiodio.
Nandritra ny korontana nanomboka ny 5 oktobra hatramin'ny 12 oktobra no nahavoasaringotra ireo mpianatra ireo, izay nohamafisin'ny fitarainana napetraky ny mpiasa sy mpandraharahan'ny oniversite tany amin'ireo mpitantana.
Nanao fanambarana ihany koa ny filohan'ny oniversiten'i Mahajanga manoloana ny hetsika nataon'ireo mpianatra tamin’ity herinandro ity, izay efa mihoa-pefy tanteraka satria efa mivoaka ny faritry ny oniversite ka tonga hatrany amin'ny fanakanana ny lalam-pirenena fahaefatra.
Miantso ny manam-pahefana mahefa aty an-toerana ny tenany hampiatra ny lalàna amin'ireo vitsy an'isa mpanatanteraka izany. Nohamafisiny fa raha 7.800 ny mpianatra eny amin'ny oniversiten'i Mahajanga, mety tsy mahatratra ny 100 akory ireo mpanakorontana ka tonga eo amin'ny kihon-dalana izoran'ny oniversite amin'ny fitoniana izao.